Laba talo oo dheeri ah oo seeth ku seegay sahaminta | Martech Zone
Laba talo oo dheeraad ah oo seeth ku seegay sahaminta
Axad, Febraayo 15, 2009 Sunday, May 29, 2016 Douglas Karr
Nicki ayaa ku soo qoray barta Seth Godin: Shan Talooyin oo ku saabsan Sahaminta. Waxaan u maleynayaa in Seth uu seegay dhowr talooyin oo muhiim ah:
Marka hore, fadlan ha sahamin macaamiishaada inaad diyaar u tahay mooyee inaad wax uun kuqabato natiijooyinka.
Marka labaad, waan kula talin lahaa nidaam kasta oo sahan ah oo ka bilaabmaya hal su'aal, "Ma noo talin lahayd?"
Sida Seth ku sheegay qoraalkiisa, weydiinta hal su'aal waxay badanaaba beddeli kartaa jawaabaha qofka ee su'aalaha soo socda. Waxaan had iyo jeer kugula talin lahaa inaad dirto su'aashan kaliya marka hore - ka dibna aan ku jawaabo sahan jawaabaya jawaabta.
Hadaad jeceshahay, isticmaal aalad sahan oo wanaagsan taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad su'aalo laan ku salaysnaato jawaabta - sidan ayaad ku soo koobi kartaa jawaabaha arrimaha muhiimka ah halkii aad weydiin lahayd tan su'aalo ah oo mowduuca ka baxsan.
Tags: seth godinsahanqalabka sahanka
Ilaha Gaadiidka Kale ee Google Analytics?
Waxaan ugu yeernaa Media, runtii waa Dhexdhexaad
Feb 15, 2009 markay ahayd 3:45 PM
Ku daris weyn liiska wanaagsan!
Feb 15, 2009 markay ahayd 4:17 PM
Waxaan sidoo kale ku dari karaa inaan u baahanahay inaan u sharaxno salka macaamiisha sababaha (yada) gaarka ah ee sahanka. (qanacsanaanta macaamilka, qeexida alaabada ee casriyeynta ama alaabada cusub, iwm.). Macaamiisha waxay u muuqdaan inay si faahfaahsan uga jawaabayaan haddii ay ogaadaan waxa jawaabaha loo isticmaali doono.